अवको ५ वर्षमा गृहयुद्ध हुन्छ
काठमाडौं । डा. राजेश अहिराजले सगरमाथा टीभीमा अन्तर्वार्ता दिदै भनेका छन्– सुन्दर देश नेपाललाई खण्ड–खण्डमा बाड्यौ, यही गतिमा मुुलुक चल्ने हो भने मुलुक गृहयुद्धमा जान्छ । अबको ५ बर्षर्िभत्र मुलुक गृहयुद्धमा फस्छ ।
अहिराज भन्छन्– मुलुक सम्प्रदायवादमा गइसक्यो । मधेसी र पहाडी भनेर हरेक कुरामा कित्ताकाट भइसक्यो । जस्तै– तराई इन्जिनियर सोसाइटि,नेपाल इन्जिनियर सोसाइटी, नेपाली डाक्टर एसोसिएसन, मधेशी डाक्टर एसोसिएसन । राजनीतिक दलहरुमा पनि मधेशी र नेपाली भनेर विभाजन भईसकेको छ । समाजका हरेक तह र तप्का, हरेक क्षेत्रमा विभाजन हुँदै गईरहेको छ । देशलाई गृहयुद्धमा जानबाट रोक्न राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । त्यो देखिन्न । समाजका अगुवाहरु नै सही बाटोमा हिडेका छैनन् । इमान्दारिताको कमी छ भन्ने विषयलाई डा.अहिराज भन्छन्– मलाई कहिलेकाहि सार्है लज्जाबोध हुन्छ । एउटा अधिवक्ताले एउटा बहस गरेको तीन लाख लिन्छ। बर्षभरी पाँच हजार पनि कर तिर्दैन । त्यस्तै एउटा डाक्टरले क्लिनिक खोलेर महिनामा पाँच–सात लाख कमाउँछ । उसले पनि बर्षभरिमा १० हजार पनि कर तिर्दैन । डाक्टर, पत्रकार, इन्जिनियर र अधिवक्ता जस्ता बौद्धिक सचेत बर्गहरु नै कर चोरीमा छन् । उनीहरु इमान्दार छैनन् । यो वर्तमान नेपालको दुर्भाग्य हो ।
डा. अहिराजसँगको एक भेटमा उनले फेरि पनि भेनका छन्– राज्यले आफ्ना नागरिकसँग राजनीति गर्ने होइन । विदेशी नुन खाएर स्वदेशको भलो चिताउन सकिन्न । मूल कुरो नेपाली बन्न नेपालको नुन खानुपर्छ ।
उनले मधेशका नेताहरुको पनि सातो खाएका छन् । उनले भनेका छन्– मधेशका नेताहरु मधेशीका लागी राजनीति गर्दैनन्,मधेशीका नाममा राजनीति गर्छन् र लज्जास्पद कुरा गर्वका साथ भन्छन् । कुनैदिन भन्लान् पहाडीहरुले २४० बर्ष भ्रष्टचार गरे अब मधेशीहरुले पनि २४० बर्ष भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्छ । ९९.९९ प्रतिशत बुद्धिजीवीहरु बौद्धिक दलालमा परिणत भईसकेका छन् । एउटा गोजीमा बायोडाटा र अर्को गोजीमा गुलामीका शब्दहरु बोकेर हिड्ने बुद्धिजीवी ? हामीले काठको घर जलाएर खरानी बनाउने योजना बनाउदैछौ । हामी सुन्दर नेपाललाई खण्डखण्डमा बाँडेर नेताका खपतका निमित्त राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्दैछौ । व्यक्ति चलाउनेले, पद्धति चल्दैन । अवको ५ वर्षमा गृहयुद्ध हुन्छ ।